why should we used, SaaS- Software asaService? - Business Centric Network (BCN)
Accounting, Business, Cloud, Digital Accountant, SME
why should we used, SaaS- Software asaService?
November 1, 2018 November 1, 2018 San Thida
ဘာကြောင့် SaaS(Software As A Service), Cloud Edition ကိုသုံးသင့်လဲ။
၁) သုံးသလောက်ပဲ ပေးရတယ်။
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဆက်သုံးစရာမလိုဘူးဆိုရင်လဲ အပြီးအပြတ်ဝယ်ထားတာမဟုတ်လို့ ဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုင်ဘူး။
အပြီးအပြတ်ဝယ်သုံးရတဲ့ On-premises software တွေမှာ အသုံးပြုမည့်နေရာ ကန့်သတ်ထားလို့၊နေရာပြောင်းသွားတာနဲ့သုံးလို့မရတော့ဘူး။ပိုင်ရှင် သို့ မန်နေဂျာက ခရီးသွားနေတဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ အစီရင်ခံစာကြည့်ချင်တဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ယာက်ကပို့ပေးတာစောင့်နေရလို့ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးတာတွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ SaaS မှာတော့ ဘယ်နေရာကမဆို အသုံးပြုသူအမည် နဲ့ လျှို့ဝှက်အမှတ်အသားရှိရင် အသုံးပြုနိုင်တာမို့ လုပ်ငန်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။ခရီးသွားဟန်လွှဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ချက်ချင်းအစီရင်ခံစာ ထုတ်နိုင်တယ်။
၃)Version အသစ်သုံးဖို့ စောင့်နေစရာမလိုဘူး။
On-premises software တွေမှာ အသစ်အသစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းကို ဆက်သွယ်ပြီး ခဏခဏ version အသစ်လာထည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြရတယ်။ ဝန်ဆောင်ခတွေထပ်ပြီးကုန်ကျနိုင်တယ်။ ကိုယ်တိုင် အသစ်ထည့်မယ်ဆိုလည်း မိမိ လုပ်ငန်းတွင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူလိုတယ်။ အသစ်ထည့်ဖို့အတွက် အချိန်ကြန့်ကြာမှုရှိတယ်။
SaaS ကတော့ ရောင်းချသူ(သို့)ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အသစ်အသစ်တွေထွက်တိုင်း လဲထားပြီးသားမို့ အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်သက်သာစေတယ်။အသစ်ထွက်လာတာကို သိတောင်မသိလိုက်ဘူး။ အချိန်မကုန်တော့ဘူး။
၄) Devices အမျိုးမျိုးမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။
On-premises software တွေကတော့များသောအားဖြင့် OS Version တွေအပေါ်မှာမှီခိုနေတယ်။ Windows အတွက် iOS အတွက် Version အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ ဝယ်ထားတာ က Windows အတွက်ဆိုရင် iOS အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့စက်ပျက်သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်ထည့်သွင်းဖို့ အချိန်စောင့်ဆိုင်းရပြန်တယ်။
SaaSမှာတော့ ဘယ်စက်မဆို အသုံးပြုလို့ရတယ်။ Windows, iOS အပြင် Mobile Devices တွေဖြစ်တဲ့ ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက် တွေမှာလဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ SaaSကို အသုံးပြုဖို့ ကြိုတင်ပြီး စက်ထဲထည့်သွင်းထားစရာမလိုဘူး။ SaaSကို သုံးဖို့ က internet connection ပဲလိုတယ်။လက်ရှိအသုံးပြုတဲ့ စက်ပျက်တဲ့အခါ၊စက်အသစ်လဲတဲ့အခါမှာတောင် ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် On-premises software တွေသုံးတာထက် Business Performance ကိုတိုးတက်စေတယ်။
၅) မိမိစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်တွေကို ပြုပြင်နိုင်တယ်။
On-premises software တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းချင်တာရှိတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ရောင်းချသူကို ဆက်သွယ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးဖို့ညှိုနှိုင်းကြရတယ်။
SaaSမှာတော့ သုံးစွဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှု အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး သုံးစွဲသူမှ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စာရင်းကိုင် စနစ်လေး စတင် အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ Business Centric Network မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ MSME Books ကို လာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 09 077 160 671 ကို ဖုန်းလေးဆက်လိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့ သိချင်တာကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးဖို့ စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများ ယခုထက်ပိုမို အောင်မြင်နိုင်စေဖို့ MSME Books မှ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီပေးဖို့ အဆင့်သင့် ရှိနေပါတယ်။
ဘာကွောငျ့ SaaS(Software As A Service), Cloud Edition ကိုသုံးသငျ့လဲ။
၁) သုံးသလောကျပဲ ပေးရတယျ။
အကွောငျးတဈစုံတဈခုကွောငျ့ဆကျသုံးစရာမလိုဘူးဆိုရငျလဲ အပွီးအပွတျဝယျထားတာမဟုတျလို့ ဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုငျဘူး။
အပွီးအပွတျဝယျသုံးရတဲ့ On-premises software တှမှော အသုံးပွုမညျ့နရော ကနျ့သတျထားလို့၊နရောပွောငျးသှားတာနဲ့သုံးလို့မရတော့ဘူး။ပိုငျရှငျ သို့ မနျနဂြောက ခရီးသှားနတေဲ့အခါမှာ လုပျငနျးရဲ့ အစီရငျခံစာကွညျ့ခငျြတဲ့အခါ တဈစုံတဈယာကျကပို့ပေးတာစောငျ့နရေလို့ လုပျငနျးနှောငျ့နှေးတာတှဖွေဈနိုငျပမေဲ့ SaaSမှာတော့ ဘယျနရောကမဆို အသုံးပွုသူအမညျ နဲ့ လြှို့ဝှကျအမှတျအသားရှိရငျ အသုံးပွုနိုငျတာမို့ လုပျငနျးကို ပိုမိုမွနျဆနျစပေါတယျ။ခရီးသှားဟနျလှဲအလုပျလုပျလို့ရတယျ။နောကျဆုံးအခွအေနကေို ခကျြခငျြးအစီရငျခံစာ ထုတျနိုငျတယျ။
၃)Version အသဈသုံးဖို့ စောငျ့နစေရာမလိုဘူး။
On-premises software တှမှော အသဈအသဈတှထှေကျလာတဲ့အခါ ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ လုပျငနျးကို ဆကျသှယျပွီး ခဏခဏ version အသဈလာထညျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုကွရတယျ။ ဝနျဆောငျခတှေထပျပွီးကုနျကနြိုငျတယျ။ ကိုယျတိုငျ အသဈထညျ့မယျဆိုလညျး မိမိ လုပျငနျးတှငျးမှာကြှမျးကငျြတဲ့သူလိုတယျ။ အသဈထညျ့ဖို့အတှကျ အခြိနျကွနျ့ကွာမှုရှိတယျ။
SaaSကတော့ ရောငျးခသြူ(သို့)ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ အဖှဲ့အစညျးက အသဈအသဈတှထှေကျတိုငျး လဲထားပွီးသားမို့ အခြိနျကုနျ၊ငှကေုနျသကျသာစတေယျ။အသဈထှကျလာတာကို သိတောငျမသိလိုကျဘူး။ အခြိနျမကုနျတော့ဘူး။
၄) Devices အမြိုးမြိုးမှာလညျးအသုံးပွုနိုငျတယျ။
On-premises software တှကေတော့မြားသောအားဖွငျ့ OS Version တှအေပျေါမှာမှီခိုနတေယျ။ Windows အတှကျ iOS အတှကျ Version အမြိုးမြိုးရှိကွတယျ။ ဝယျထားတာ က Windows အတှကျဆိုရငျ iOS အတှကျအဆငျမပွနေိုငျဘူး။လကျရှိအသုံးပွုနတေဲ့စကျပကျြသှားတဲ့အခါ ပွနျလညျထညျ့သှငျးဖို့ အခြိနျစောငျ့ဆိုငျးရပွနျတယျ။
SaaSမှာတော့ ဘယျစကျမဆို အသုံးပွုလို့ရတယျ။ Windows, iOS အပွငျ Mobile Devices တှဖွေဈတဲ့ ဖုနျးနဲ့ တကျဘလကျ တှမှောလဲ အသုံးပွုနိုငျတယျ။ SaaS ကို အသုံးပွုဖို့ ကွိုတငျပွီး စကျထဲထညျ့သှငျးထားစရာမလိုဘူး။ SAAS ကို သုံးဖို့ က internet connection ပဲလိုတယျ။လကျရှိအသုံးပွုတဲ့ စကျပကျြတဲ့အခါ၊စကျအသဈလဲတဲ့အခါမှာတောငျ ခကျြခငျြးအသုံးပွုနိုငျတယျ။
ဒါကွောငျ့ On-premises software တှသေုံးတာထကျ Business Performance ကိုတိုးတကျစတေယျ။
၅) မိမိစိတျကွိုကျလိုအပျခကျြတှကေို ပွုပွငျနိုငျတယျ။
On-premises software တှအေသုံးပွုတဲ့အခါမှာ ပွငျဆငျဖွညျ့သှငျးခငျြတာရှိတိုငျး ဝနျဆောငျမှုပေးသူ၊ရောငျးခသြူကို ဆကျသှယျပွီး ပွငျဆငျပေးဖို့ညှိုနှိုငျးကွရတယျ။
SAAS မှာတော့ သုံးစှဲသူရဲ့လိုအပျခကျြနဲ့ အသုံးပွုနိုငျမှု အတိုငျးအတာပျေါမူတညျပွီး သုံးစှဲသူမှ စိတျကွိုကျပွငျဆငျလို့ရတယျ။
လူကွီးမငျးတို့အနနေဲ့ အထကျပါ အခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီတဲ့ စာရငျးကိုငျ စနဈလေး စတငျ အသုံးပွုဖို့ စဥျးစားနတေယျဆိုရငျတော့ Business Centric Network မှ ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ MSME Books ကို လာရောကျလလေ့ာဖို့ဖိတျချေါပါတယျ။
ဆကျသှယျခငျြတယျဆိုရငျတော့ 09 077 160 671 ကို ဖုနျးလေးဆကျလိုကျပါ။ လူကွီးမငျးတို့ သိခငျြတာကို အသေးစိတျ ရှငျးပွပေးဖို့ စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။
လူကွီးမငျးတို့ လုပျငနျးမြား ယခုထကျပိုမို အောငျမွငျနိုငျစဖေို့ MSME Books မှ တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ကူညီပေးဖို့ အဆငျ့သငျ့ ရှိနပေါတယျ။
Previous postDigital Accountant
Next postMSME Books @ Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises